विश्वमा महिलाको शुद्धता पत्तो लगाउने अनौठो रित
युथोपियन कल्चरमा केटीको शुद्वता पत्ता लगाउने तरीका
केटीहरुको पवित्रता पत्ता लगाउन सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो तरिका साउदी अरब र मिश्र जस्ता केही मुस्लिम देशमा प्रचलित छ, छिमेकी भारतमा पनी येस्ता संस्कार जिवित नै छ
एजेन्सी २१ असोज । हरेक देशमा महिलाको विवाहको लागि उमेर निर्धारण गरिएको हुन्छ । निर्धारित उमेरभन्दा अगाडि विवाह गर्नुलाई गैर कानुनी मानिन्छ । केही देशमा त महिलालाई कुमारित्व परीक्षण गर्ने नाममा मृत्युसम्मको सजाय दिइन्छ ।
युथोपियन कल्चरमा पनि अनौठोको तरीकाबाट केटीको शुद्वता पत्ता लगाइन्छ । त्यहाँ नयाँ दुलहीले स्कार्फ च्यापेर सुत्नुपर्छ । भोलिपल्ट यदि स्कार्फमा रगतको निशाना नभएमा महिलालाई कुटपिट गर्छन्, र विवाह पनि तोडिन्छ । यदि स्कार्फमा रगतको निशाना भएमा दुलाहाको घरमा उपहारसहित पठाउने चलन छ ।
महिलाको कुमारीत्व जाँच गर्न भारतमा पनि एक प्रथा अझै छ । केही समुदायमा महिलाको सास रोकेर पानी भित्र उभिन लगाएर पवित्रता जाँच गर्छन् । यस क्रममा एक व्यक्तिले जमिनमा सय कदम चल्नु पर्छ । यदि यो समयमा महिलाले सास रोकेर स्थिर रहेमा पवित्र मानिन्छ ।
त्यस्तै जार्जिया समेत अन्य पश्चिमा देशहरुमा केटीहरुको पवित्रता जाँच गर्नको लागि प्योरिटी औँठी लगाउने गरिन्छ । यस औँठी लगाउने समयमा केटीहरुले इश्र्वरको अगाडि विवाह पहिला कुनै पुरुषसँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने छैन् भनेर कसम खाने गर्छन् ।
साचो माया पत्ता लगाउने ब्रा...
१६ वर्षिया किशोरी फिनल्याण्डको प्रधान मन्त्रि...
भाडामा ब्वाईफ्रेण्ड पाइने !...
कोरोना संक्रमण भए/नभएको कुकुरले सुँघेरै पत्ता लगाउँछ...
जब काठमाडौंको मुल सडकमा एभ्रो विमान गुड्यो!...
विश्वकै सबैभन्दा बढी उमेरका ब्लेमको ११६ वर्षको उमेरमा निधन...
जब बालकले कुकुरलाई मास्क लगाइदिए..(भिडियो हेर्नुस्)...